Baalkii Madoobaa Ee Nolosha Oprah Winfrey (Qormo Xiiso Badan) – IFIYE
Waxa ay ahayd gabar madoow, xoog badan, caqliguna qanjaha joogo, waxa ay kasoo jeedday qoys dhaqan ahaan Soomaalida la mid ah, kala tagidda badan awgeed; nasiib uma helin in ay aabbaheeda iyo hooyadeeda wakhti fiican la qaadato sida aniga (Cabdi) oo kale. Dhowr jeer oo nolosheeda caruurnimada ayaa loo diga rogay meelo kala duwan oo reerkoodu dagnaa.
Waxa ay ku dhalatay saaxiibtinimo, meher la’aan iyo raaxo aan mas’uuliyaddeeda la qaadin, taasna waxa ay sabab u ahayd burburkii ku dhacay qoyskeeda, kaas oo galaabsaday nolosheedii dambe.
Lix sano jirkeeda, waxaa loo diray Wuqooyiga Mareykan ka si ay ula midoowdo hooyadeeda iyo laba caruur oo ay naaska wadaagaan oo kusugnaa Milwaukee oo ahayd rabta ugu badan ay ku noolaayeen Madoow Mareykan ka fakhriga la ciir ciirrayay; saboolnimada waxaa u dheereyd cabsi amaan, oo dumarka waayadaas waxaa caadi ahayd in la kufsado oo la jirddilo, kuwa qaarna ay sababsadaan.
Sagaal jirkeeda ayeey la kulantay dhaqankii caadada ka ahaa deegaankeeda cusub, waxaana xilligaas lagula kacay kufsi arxan darro ah, kaas oo sabab u noqday is baddal abadi ah oo ku yimid geeddi socodkii nololeed ee gabadhan.
Markii ay gaartay da’da 12-aadka, waxa ay u wareegatay deegaankii uu aabbaheedii sharci darrada ahaa joogay ee Nashville, ha yeeshee halkan waxa ay ka heshay xoogaa farxad ah oo ka duwan middii ay ku heysatay Milwaukee, waana xilliga ay bilowday in ay iskuulka si wanaagsan u dhigato, oo ay door muuqda ku yeellato dumarka aynigeeda ah, hadal jeedinta ayeey aad qurux badneyd, cod tolmoon oo cid walba soo jiidan karana waa ay lahayd, waana sababta ay ugu baxday naaneysta “The Preacher” “Sheekhadda/wadaadda” maadaama ay si hufan ugu xeel dheeraatay Injiilka (Gosple/ Bible) ha yeeshee mar walba uur ku taalladii kufsiga ayaa urrugo ku reebay.
Kolkii ay is lahayd ugu yaraan waad kasoo kabatay uur ku taalladii kufsiga ayeey markale la kulantay kufsi, kaas oo uu u geystay ina adeerkeeda markii ay ahayd 19-sano jir, jeer uu u kaxeeyay in uu usoo iibiyo jalaato, ka dibna uu xoogay, se wuxuu ugu hanjabay in uu dili doono haddii ay sheekada labadooda ay dhaafto.
Dhowr bilood ka dib waxa ay la kulantay kufsi is daba joog ah, kuwaas oo keenay in uur qaaddo, reerkeeda ayaa ogaaday, waxaana ay sheegtay dhammaan tacaddiyadii ay la kulantay intii ay ku jirtay diga rogashadii joogtada ahayd ee ay sababta u ahaayeen waalidkeed oo kala dhintay; todobo bilood ka dib waxa ay dhashay cannug yar oo keliya dunida saarnaa in ka yar laba todobaad, dadka qaar ayaa sheega in ay u bixisay “Haabiil” ama “Abel” ha yeeshee lama hubo.
Wixii intaas ka dambeeyay waxa ay qaadatay go’aan ah in aysan weligeed guursan, oo ay san ubad dhallin, taasna waxaa sabab u ahayd kufsi joogta ah oo hareeyay mustaqbalkeeda dhallinyaranimo.
Kama quusan nolosha, oo waxa ay ka faa’iideysatay hibada rabbaaniga ah ee ay dumarka kale dheereyd, taasna waxa ay sababtay in ay noqoto dhowr bilood ka dib kufsigii nolosheeda baddalay gabadhii ugu horreysay oo madow Mareykan ah oo TV boos ka hesha, waxaana ay ka shaqo bilowday iyada oo weli da’da tobanaadka ku jirta WTVF-TV,
Kadib waxa ay ku biirtay CNN, oo ay ka noqotay mid kamid ah dadkii ugu caansanaa ee abid TV gaas ka qabta bernaamij, intaas waxaa dheer in ay qaadday wareysigii afaraad ee loogu daawashada badnaa taariikhda gudaha Mareykan-ka, waana kii ay la yeelatay fanaankii caanka ahaa ee Micheal Jekson, kaas oo ay usoo daawasho tageen in ka badan 36-Million oo daawadayaal.
1Million oo cod ayuu ku helay Barack Obama madaxeeda, intii lagu guda jiray olollihii doorashada ee 2008-dii. Ma heysato wax caruur ah, ha yeeshee waxa ay leedahay shan ey iyo in kabadan 50-million oo caruur ah oo agoon u badan, kuwaas oo ay caawiso caalamkana ku kala dhaqan, waxa ay leedahay hey’ad magaceeda ah, taas oo ka shaqeysa hormarinta caruurta iyo dumarka, waxaa loogu magac daray “Boqoradda warbaahinta” “Queen Of All Media”
$75 Milyan ayaa lagu qiyaasay 2013-kii, mushaarkeeda sannad laha ah, halka lacagta guud ee ay heysato lagu sheegay 3bilyan (Milyaar) oo dollar-ka Amerikaan ka ah, taas oo la micnaha ah in ay ku jirto dumarka adduunka ugu saameynta badan uguna qannisan.
Rumeyso tani waa Oprah Winfrey, soo saaraha barnaamijka Oprah Show ee ka bixi jiray hilinka CNN, waxaa jira dumar badan oo aan dareemayo in ay la kulmeen dhacdo nololeed lamid ah midda ay la kulantay Oprah, welina isku dayay in ay niyad jab iyo “wax ma tari karo!” ku dhammeystaan wakhtigooda, ha yeeshee weli waxaa idin furan daaqad iyo albaab wayn oo aad u mari kartaan dowga guusha.